कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात । - Nepali Christians Site
कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ।
Posted by Simon Rai on December 4, 2013 at 4:30pm
बिचरा कागको मात्र के कुरा गर्नु वर्ष दिनको एक पटक हर्षको साथ मनाईनु पर्ने क्रिसमस पनि धेरै विश्वासीहरुको लागी हर्ष न विस्मात बनेको छ । सबै विश्वासीहरु ख्रीष्टमा एकै मनको भई आनन्द साथ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवमा सहभागी भई खुशी, आनन्द साटा–साट गर्दै मुक्तिको सु–सन्देश छर्दै घर दैलोमा क्यारल खेल्दै हर्षोलासको साथ मनाउनु पर्ने महान चाड क्रिसमस आएता पनि धेरै घर परिवारमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेको छैन । बिसौं वर्ष अघिको जस्तो त्यो आनन्दको रौनक हिजो आजको दिनहरुमा विश्वासीहरुको जीवनमा देख्न पाईएको छैन । वर्ष दिनको एकपटक मनाईने क्रिसमसमा एक छाक गुन्द्रुककै झोल किन नहोस्, प्रेम र एकतामा एक गाँस खाना खाए र शुभ–कामना साटा–साट गर्दा कति आनन्द हुन्छ ! प्रशस्त हुनेको त कुरै नगरौं, दुई छाक टार्न पनि धौ–धौ हुनेहरुले पनि मनमा दुःख र पिडाँ लुकाएर झिनो खुशी र आनन्दको आशा लिएर प्रभु येशूको जन्म दिनमा रमाउन चाहन्छन् । दुई गाँसै भएता पनि वर्ष दिनको यो उत्सवमा मण्डलीका अगुवा, लिडरहरु संग–संगै, परिवारसँग खुशी र आनन्दले प्रेम भोजमा सहभवगी हुँन चाहन्छन् । तर मण्डलीमा अगुवाहरुको मन मुटाव भएको कारण र विभिन्न प्रकारको गनथनले गर्दा जसो तसो गरी आनन्दको लागी जुटाएको त्यो साहस पनि निरासमा परिणत हुदैछ । वर्षको एक पटक मनाईने चाडमा पनि गिद्धे नजर लगाउने गोठालाहरुको कारण विश्वासीहरुको आत्मीक जीवनमा पनि त्यसको नकारात्मक असर परेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
आज धेरै विश्वासीहरु असल गोठालोको खोजीमा भौतारी रहेका छन् । त्यसको संरक्षण कसले गर्ने ? पहिलो शताब्दीमा त विश्वासीहरुको बीचमा हेरचाहा गर्ने “असल गोठालो” (यूहन्ना १०:११) प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयेम हुनुहुन्थ्यो “तर भीडहरुलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरुका निम्ति दयाले भरियो । किनभने तिनीहरु गोठालाबिनाका भेडाहरुजस्तै हैरान र असहाय भएका थिए ।” (मत्ती ९:३६) आज हैरान र असहाय भएका विश्वासीहरुका निम्ति असल गोठाला कहाँ छन् त ? गोठालाको दर्जा पाएका आजका अगुवाहरु मण्डलीलाई चिया पसलका रुपमा प्रस्तुत गरेर विश्वासीहरुको आत्मीक जीवनमा काँडा बनेर अबरोध खडा गर्दैछन् । आखिर किन? त्यसको एउटै मात्र कारण हुन सक्छ मण्डलीमा एकता नहुनु । एउटा गोठालोले नेतृत्वको जिम्मेवारीतालाई पुरा गर्न नसक्नु ।
मण्डलीलाई एउटा परमेश्वरको वासस्थानको रुपमा नहेरेर चिया पसलको रुपमा हेर्नु । यदि मण्डलीलाई परमेश्वरको वासस्थान सम्झेको भए त्यहाँ एकता हुन्थ्यो, त्यहाँ परमेश्वरको आराधना हुन्थ्यो अनि त्यहाँ परमेश्वरको आशिष रहन्थ्यो । (प्रेरित २:४२–४७) तर दुःखको कुरा मण्डलीलाई चिया पसलको रुपमा हेरी रहेका छन् । त्यसै कारण जब मण्डली भित्र पसिन्छ तब काने खुसी शूरु हुन्छ फलानो यस्तो, त्यस्तो, यसले यसो गर्यो, त्यसले यसो गर्यो के के हो के के.....! मण्डली भित्र त परमेश्वरको आराधना हुन्छ होईन र ?
अब एक छिन कृपया शान्त रहनुहोस ! एक छिन !! अब छातीमा हात राखेर भनौं, एकछीन बिचार गरौं, मौन बसौं र भित्र हृदय देखी सोचौं के हामीले असल गरेका छौं त ? के यहाँ परमेश्वरको सेवाकाई भई रहेको छ त ? यदि म गलत छु भने त्यसको सजाय भोग्नु तयार छु, मैले तपाईँको चित्त दुखाएको छु, मलाई माफ गर्नु होस्, म सारा मण्डलीको सामु यो मेरो गल्तीलाई स्वीकार गर्छु, म घुँडा टेक्छु, दुई हात जोड्छु, मलाई माफ गर्नु होस् आईन्दा म यस्तो गल्ती गर्ने छैन ....! प्रभु येशूले भन्नु भएको छ “यसरी नै पश्चाताप गर्ने एक जना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरुका सामुन्ने आनन्द हुन्छ ।”(लूका १५:१०) ईमान्दारीता साथ भन्नुहोस ! के तपाईँ यसरी पश्चताप गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
जब तपाईँ र म यसरी पश्चाताप गर्छौ तब मात्र मण्डलीमा नयाँ परिवर्तन आउँछ । हामी संसारलाई हेर्छौं, कसैले केहि भन्छ की भनेर सोच्छौं, लाज मान्छौं तर पावलले सिकाएका कुरा यहि हो “माथिका कुरामा मन लगाओ । पृथ्वीमा भएका कुरामा होईन ।”(कलस्सी ३:२) जब हामी यसरी पश्चाताप गरेर ख्रीष्टको रगतले धोईन्छौं र नयाँ जीवन जीउछौं अनिमात्र तपाईँको जीवन देखि ख्रीष्टको सुवास्ना छरिन्छ अनि मात्र तपाईँले दुई हजार वर्ष पहिले जन्मनु भएको ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाईएको मानिन्छ । हुनत कत्तिले “के खानै नपाएको जस्तो बेवाहार देखाएको” पनि भन्छ, कत्तिले “के क्रिसमस भन्दैमा खानै पर्छ ? रमाउनै पर्छ ? प्रार्थना ग्यो भैहाल्यो नी” पनि भन्छन् । तर कुरा खानु र रमाउनुको मात्र होईन आफु भित्र परिवर्तन भएर सबै विश्वासीहरुसँग एउटै विचारको हुनु हो । एकै मनको भएर खुशीमा रमाउनु हो । नखाँदैमा र प्रार्थना गर्दैमा जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन प्रार्थना त विश्वास नगर्नेहरुले पनि गर्छन् । तसर्थ विश्वास गर्ने हरुको निम्ति यो वर्षको क्रिसमस हर्ष न विस्मातको न बनोस् । यस वर्षको क्रिसमसलाई भित्र हृदय देखि स्वागत गरौं सानो ठुलो गरीब धनी सबै लाई समेटौं र एकै मनको भई ख्रीष्टको सु–सन्देशलाई प्रचार गरौं ।
अन्तमा भन्नु पर्दा दुई हजार वर्ष अघि जन्मनु भएको ख्रीष्ट येशूलाई पुःन जन्माउन त सक्दैनौं तर तपाईँ र म भित्रको हृदयलाई धोएर बसाल्न भने अवश्य सक्छौं । त्यसकारण आफ्नो विचार परिवर्तन गरौं, नम्रताको जीवन जीऔं, हाँसी खुशी आफ्नो औकात अनुसारको गुन्द्रुकै झोल सँग भए ता पनि एकतामा प्रेममा रहेर मिठो मानेर प्रेम भोज खाऔं न्यानो अँगालोमा बाँधीएर एउटाले अर्कोलाई आत्मीक सँगतीको लागी प्रोत्साहन गरौं र ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गरौं ।
मेरो क्रिसमसको यहि शुभ–कामना सबै ख्रीष्टका सन्तहरुलाई....
परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिऊन् ।
Tags: article Like4members like this
Comment by aruna chhantyal on December 10, 2013 at 10:43pm dherai dinpa6i tpiko ramro lekh padhna paiyo.dhanyawad tatha happy christmas Comment by Simon Rai on December 8, 2013 at 5:36pm तपाईँको मिठो प्रतिकृयाको लागी धन्यावाद ! मेरो पनि तपाईँलाई शुभकामना... Comment by अरुणा राई ! on December 6, 2013 at 2:37am अब आज धेरै दिन बाद तपाईको बल्ग पडन पाईयो खुशी लाग्यो ! राम्रो सुझाउ दिनु भएको निम्ती धेरै धेरै धन्यबाद छ तपाईलाई !
मेरो बिचारमा पनि एकता बिना ईसाई जगत धमिराले खाएको खोक्रो घर जस्तो हो जो बहिर बाट देख्नमा सुन्दर देखिन्छ तर हवाको सानो झोकाले पनि लडाई भताभुङ बनाई दिन्छ ! अब हरेक चर्चमा एकता ल्याउनलाई प्रभुको नयाँ आज्ञालाई पालन गर्न अति आवश्यक छ त्यो नयाँ आज्ञा हो - युह्न्ना - १३:३४:३५ एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरुलाई दिँदैछु तिमीहरु एक अर्कालाई प्रेम गर ! तिमीहरुसँग मैले प्रेम गरे जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरुले पनि एक अर्कालाई प्रेम गरयौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरु मेरा चेला हौ !
अब यदि हामी आफुलाई येशुको चेला भन्छौ भने यो आज्ञालाई पालन गरी देखाउन पर्छ ! आपसमा भएको मन भुटावलाई भुल्न पर्छ ! चाहे आफ्नु गल्ती नै किन नहोस् आफुले नगरेको गल्तीलाई पनि आफुले गरे झै स्वीकार गरी आफुलाई पर्मेश्वरको नजरमा नम्र बनाँउ यसै उपेक्षाको साथमा यस साईट सबै प्रभुको जनलाई क्रीसमसको हार्दिक शुभकामना दिन चहान्छु ! Comment by krishna bhandari on December 5, 2013 at 8:55am परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिऊन् ।मेरो क्रिसमसको यहि शुभ–कामना |
''काईलो'' Comment by Simon Rai on December 5, 2013 at 8:50am धेरै-धेरै धन्यावाद श्रवन भाई ! मेरो पनि तपाईँलाई शुभकामना...
Comment by Shrawan Bomjan on December 4, 2013 at 7:30pm फेरी धेरै दिनपछि मैले केहि नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाए । दाजुलाई धेरै-धेरै धन्यावाद । साथै हजुरलाई पनि ख्रीष्टमस अवसरको अग्रिम शुभकामना । परमेश्वरले तपाइलाइ प्रसस्त आशिष दिनुभएको होस् । RSS